Soosaarayaasha Jalaatada Luulka Loose | Shiinaha Loose Pearl Kuul Warshad & Shirkado
26-29mm Midabka Dabiiciga ah Biwa Freshwater Pearl Bead Strands
Magaca Biwa beads wuxuu ka yimid Harada Biwa ee dalka Japan. Jawharta laga soo saaray Lake Biwa guud ahaan waxaa loo yaqaan Biads beads. Si kastaba ha noqotee, wasakheynta halista ah ee harada Lake Biwa ee dalka Japan, asal ahaan ma jiraan wax luul ah oo laga beero harada Lake Biwa.
Dalka Shiinaha, luul kala duwan ayaa lagu beeraa, luulka biwa ayaa ka mid ah. Qaab dhismeedkeedu waa mid dheer oo caato ah, taas oo ah muuqaal aad u muuqda oo faa iidadeedu marka la barbar dhigo dhammaan noocyada luulda asalka ah ama galka ah Waxaad u adeegsan kartaa dahabka DIY ee qaababka kala duwan, soo jiidashadeeda lama helin luul kale, sidoo kale waa dhalaal badan
7-7.5mm Freshwater Pearl round Pearl Beads
Sababtoo ah luul biyo macaan ayaa la beeraa iyada oo aan lahayn nukleus, waxaa saameyn ku yeelan doona arrimo badan oo dibadeed inta ay korayaan Waxaa jira luullo badan oo qaab aan caadi ahayn u qaabeysan. qaababka guud waa wareegsan yihiin, oval, badhan ayaa qaabeeya, bariis qaabaysan, qaab yaanyo ah, qaab gaar ah, iwm. Dhexdooda, luullada wareega waxay ka kooban yihiin wax ka yar 5% wadarta wax soo saarka luulka. Luul si fiican u wareegsan oo aan iin lahayn oo ka hooseeya iftiinka xoogga leh ayaa runtii mid ka mid ah tobanaan kun, sidaas darteed qiimaha luul biyo macaan ayaa weli aad u sarreeya. Runtii waa iska caadi in luul biyo macaan oo tayo sare leh uu qiimahiisu gaarayo kumanaan ama xitaa tobanaan kun.
Jawhar-biyoodka ayaa midabo badan leh, guud ahaan caddaan, miro guduud, casaan, guduud iyo midabbo kale oo dabiici ah, dusha sare ee luulkuna waa mid hagaagsan oo dhaldhalaalka waa jilicsan yahay, isaga oo xidhan ayaa ka tarjumaya dabeecadda haweenka bari
Qaab muuqaal ah oo ah Midabbada Casaanka ah ee Midabbada Mabe ah oo loogu talagalay Sameynta Dahabka lammaanaha ah ee loo yaqaan '9-10mm Pearl Water Pearl No Hole'
Tani waa run luul. Midabada waa dabiici. In kasta oo dusha sare uu aad u siman yahay, qaababka qaarkood si cad ayaa loogu arki karaa iftiinka xoogga leh, iyo qaababkan ayaa ku daraya nooc kale oo qurux ah. Ka dhigida dharka dharka waxay ku dari doontaa xoogaa iftiin ah dharka, fudud oo aan caadi ahayn. Cabirkiisuna sidoo kale waa ku weyn yahay luul mabe, waxay kaa dhigi kartaa inaad noqoto bartilmaameed. Mana kala duwana sida luul, tani waxay aad ugu habboon tahay dadka qaba wax yar oo qas-qas ah, sidoo kale bilowga DIY
Jawharta Edison waa luul biyo-abuur leh oo biyo diirran, kuwaas oo ka mug weyn marka loo eego luulka caadiga ah ee biyaha saafiga ah. Dhexroorka iyo dhalaalka labaduba waxay ku dhow yihiin luul biyood qaali ah oo qaali ah, Edison guud ahaanna waxaa lagu soo rogay wax aan ka badnayn saddex sano, sidaas darteed waxay kaloo leedahay midabbo hodan ah iyo qiimo jaban oo kuwa aan lahayn luul biyo macaan leh. Laakiin luulyada Edison oo dhami ma wada rogaan, qaybo badan oo ka mid ahi waxay u kori doonaan qaab Baroque ah, wareega ugu fiican ee iin yar ayaa ka yar.
Laakiin cillad dilaa ah ayaa ka dhigaysa mid aan aad loo soo dhaweyn! Ka dib markii la xidho in muddo ah, dusha sare ee lakabka luul ee Edison ayaa u muuqda khadad fiican. Dusha sare ee luulku ma sii fiicnaanayo, luminta dhalaalka, midabkuna waa caajis.
AA16-17mm Big Baroque Pearl Loose Bead, Midab Cad oo Dabiici ah Baroque Pearl, Flameball Pearl, Undrilled
Pearl Baroque waa mid ka mid ah jawharadyada dabiiciga ah ee ugu quruxda badan suuqa dahabka. Waa xulasho ku habboon dumarka geesinimada leh ee doonaya inay adduunka tusaan sida ay gaarka u yihiin.
A 15-16mm Big Baroque Pearl Loose Bead, Luster Sare Luul Tayo Wanaagsan Si Loogu Sameeyo Dahab Pearl
Waa maxay Baroque Pearl? Mar dhow ayaa la i weydiiyay su’aashan. Jawaabtaydu Waxay ku saabsan tahay qaababka! Ereyga Baroque wuxuu ku qeexayaa qaabka luul qaab farsamo.
AAA 13-14mm Luul Qadaadiic, Luul dabiici ah oo Caan ah oo Biyo Macaan ah, Luullo Dhaqameed dabacsan, Qeyb Bixin Dhagax Pearl
Kuwani waa luul qurux badan oo dahab ah oo loogu talagalay sameynta dahabkaaga. Waxay ka samaysan karaan silsilado luul, jijimooyin iyo kaatunno, ama qurxinta qurxinta. Waad dooran kartaa qashin, kala bar-qod ama qoditaan si aad u daboosho baahiyahaaga.
AAA 12-13mm White Drop Coin Luul, White Teardrop Coin Pearl Pearl Pears Pearing for Earrings
Pein Pearl waa luul aad u fara badan oo fidsan, oo la gashan karo sida la doono inta lagu jiro maalinta, iyada oo lagu darayo taabashada soo jiidashada shakhsi ahaaneed fiidkii. Waxaa loo qaabeeyey sida badhannada fidsan ama lacagta qadaadiicda ah, qadaadiicda ugu tayada fiican iyo luulka ayaa ku ifin doona luul qurux badan.
AA 1.5mm-2mm Dabiici Caddaan Dabiici ah oo Nooc Biyo Macaan leh,
Haa, luulradani waa dhab! Luul qurux badan ayaa imanaya aad iyo aad u yar! Sida dhammaan dahabka zhuji, luulladani waa luul dhaqameed dhab ah oo aan shakhsi ahaan uga soo helno beero-beero luul ah oo dhaqankeenna leh.
AAA 1.5mm-2mm Dabiici Caddaan Dabiici ah oo Caan Biyo ah Peads Water Peads,
Waxaan bixinaa dhowr nooc oo ah kuul luul luul: abuur luul yar yar, luul bariis abuur ah, luul yar oo wareegsan, midab dabiici ah xargaha luul.
AAA 16-18mm Big Baroque Pearl Loose Bead, White Flable Ball Pearl, Baroque Pearl Pendant, Baroque Dhaqanka Freshwater Pearl
Luul Baroque waa nooc ka mid ah luul aan geel ahayn. Qaabku wuxuu u dhexayn karaa wax yar oo ka soo biqis ah illaa qaab kala duwan oo oval ah, qaloocsan, la soo saaray ama qaab ballaadhan.
Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan, Aaa Biyo Macaan, White Gray Freshwater Pearl, Hilqado Aroos, Hilqado Pearl Pear, Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl,